खर्च न्यून हुनुमा दोष कसको ? | गृहपृष्ठ
Home खर्च न्यून हुनुमा दोष कसको ?
खर्च न्यून हुनुमा दोष कसको ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरेको रकम कम खर्च भएको समाचार आर्थिक अभियानले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा सरकार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले र निर्वाचनको आचारसंहिताले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ पनि उद्धृत गरिएको थियो । मन्त्रालयको त्यो तर्क भने उचित लागेन ।
जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले खर्चको अङ्कलाई हेरेर निराश हुन नपर्ने भन्दै काम रोकिएको होइन, गति सुस्त भएको हो भन्ने तर्क राखेका रहेछन् । यस्तो तर्कले नेपालमा जतिबेला मनलाग्छ त्यतिबेला काम गरे हुन्छ भन्नेहरूलाई बल प्रदान गरेको देखिन्छ ।
सरकारको पूरै ध्यान निर्वाचनमा गएको र काम गर्ने पक्ष बिदामा रहेको कारण गौरवका आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्ने तर्कले काम नगर्नेलाई नै बल पुग्छ भने काम सम्पन्न भएपछि त्यसबाट लाभ पाउने आसमा बसेकालाई निराश बनाउने काम गर्छ । पहिले नै निर्धारण भइसकेका आयोजनामा गरिने खर्चलाई निर्वाचन आचार संहिताले रोकेको भन्नु पनि ढाकछोप गर्नुबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । यस्तो ढाकछोपको चालाले केहीलाई फाइदा पुग्ला । तर, राष्ट्रलाई घाटा लाग्ने काम हुनु हुँदैन । वास्तवमा आयोजनाको रकम खर्च हुन नसक्नुमा कतिपय कर्मचारीको निजी स्वार्थ गाँसिएको कारण भन्नेहरू पनि छन् । त्यसमा जिम्मेवार निकायका कर्मचारीको भनाइ के छ कुन्नि ?